May Nyane: October 2007
ဒီတလော ဘာစာမှမရေးနိုင်။ ဘလော့တွေ လည်ဖတ်။ ဖတ်နေကျ ပြည်တွင်းက ဘလော့တွေဆီ လွမ်းဆွတ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမမောင်လေး သစ်ကောင်းအိမ်က သူကဗျာရေးပြီးတိုင်း ပို့ပေးနေကျမှာ သူ့ကဗျာတွေပဲ ကြိုက်ကြိုက်ပြီး တင်ပေးချင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ဒီတလောမှာ ကဗျာတွေအများကြီး ရေးချင်နေပြီ အမရေ..တဲ့။ ကျမလည်း စာတော့ ပြန်ရေးချင်လာနေပါပြီ။ ကျမတို့ ဘ၀တွေထဲ ဝေးဝေးနေရတဲ့ လွမ်းဆွတ်ရမှုတွေ အကြောင်း ပေါ့။
စိန်ပန်းပွင့်ချိန်မှ သင်္ကန်းပွင့်ချိန် ညီမလေး
အဝေးကြီး အဝေးကြီးဝေးခဲ့တယ် ။ ။
ငါ့ ဘောပင်လေးကိုတော့ ခွေးစာမကျွေးနိုင်ပါ
အရင်းအတိုင်း ထိုင်မြည်းနေတာ။ ။
(၂၅၊ ၁၀၊ ၂၀၀၇)
( ၂၅ – ၁၀ – ၂၀၀၇ )
"အောင်ပါလေ” ကို “ရှုံးပါလေ” လုပ်ကြပါစို့။
စစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးအရ ဆန္ဒပြနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတခုပါ။ အန္တရာယ်မများသလို၊ လူတိုင်းလည်း လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကလေးတခုဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်လေးပါ။ လူတွေက အစိုးရရောင်းတဲ့ “အောင်ပါလေထီ” တွေကို မ၀ယ်ကြဖို့ပါပဲ။
ကိုးကားလို့ရတဲ့ သတင်းတပုဒ်အရ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ စတ်တင်ဘာလ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရထီတစောင်ကို ကျပ် (၁၀၀) ပေးရပြီး၊ ဆုကြီးတွေက ကျပ်သန်း (၃၀) ကနေ သန်း (၅၀) အထိ ရနိုင်ပါတယ်။ မက်စရာပါပဲ။ လစဉ် ရောင်းရတဲ့ ထီက စောင်ရေ ၃၂-သန်းခန့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဆုကြေး ပိုပေးလာလို့ စစ်အစိုးရက ထီစောင်ရေ နောက်ထပ် ၂၁-သန်း ရိုက်နှိပ်ရောင်းချရမယ်လို့ တွက်ထားပါတယ်။ ဆိုပါစို့- ရောင်းရနိုင်တဲ့ ထီအစောင်ရေက ၅၃- သန်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစောင်ကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ မြှောက်လိုက်တဲ့အခါ အစိုးရအတွက် ကျပ်သန်း ၅၃၀ ရလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအထဲက စစ်အစိုးရက ၄၀% ကို အခွန်အနေနဲ့ ကောက်ယူလို့ရရှိပါတယ်။ အဲသည်တော့ လစဉ် အခွန်ငွေ ကျပ် ၂၁၂ သန်း၊ (နှစ်စဉ်တွက်ရင် ကျပ် ၂၅၄၄ သန်း) ၀င်ငွေ ရစေမယ့် ကိစ္စပါ။ ဒီငွေတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(အကိုးအကား။ AFP: Myanmar's lottery dreams twice as pricey: report , Thu 22 Sep 2005)
- တာဝန်သိသိဖြင့် ထီမထိုးပါနဲ့။
- မနေနိုင်ရင် အစိုးရဆီတိုက်ရိုက် မရောက်စေမယ့် ထီထိုးပါ။
- မိတ်ဆွေများကို အစိုးရထီ မထိုးရန် တိုက်တွန်းပါ။
- ထီရောင်းချနေသည့် ဆိုင်များကို တိုက်တွန်းပါ။
- ထီအရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်ပေးနေကြသည့် ရုပ်ရှင် မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ ဖက်ရှယ်မယ်များကို တိုက်တွန်းပါ။
စစ်အစိုးရ ကျဆုံးရပါလိမ့်မည်။ အောင်ပါလေလည်း ရှုံးပါလေ ဖြစ်တော့မည်။
လတ်တလောတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သာသနာ့ အာဇာနည်၊ ကျောင်းသား အာဇာနည်များ၏ ဆန္ဒပြပွဲများကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ္ဘာက သိရှိကာ အကူအညီများလည်း ပေးလာ ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ စစ်အစိုးရ လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ရာ အရေးပါတဲ့ ခြေလှမ်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီခြေလှမ်းတွေကို ရပ်လိုက်လို့ မဖြစ်ပါ ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ လူ ထုလှုပ်ရှားမူများနဲ့ ဆက်လက်၍ လျှောက်လှမ်းသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မူတွေကြားထဲက လူထုပါဝင် လှုပ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ရှာကြံတဲ့အခါမှာ တခု သတိထားမိတာက သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတွေမှာ မီးပုံးပျံလွှတ်ကြတာကို သွားသတိရမိပါ တယ်။ ဒီတော့ ဒီနှစ် မီးထွန်းပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ဆန္ဒမှန်တွေပါတဲ့ မီးပုံးပျံလေးတွေ လွှတ်ကြရင် မ ကောင်းဘူးလား။ သာသနာ့ အာဇာနည်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သာသနာ့အလံပါတဲ့ မီးပုံးပျံ အနီလေးတွေ၊ ကျောင်းသား အာဇာနည်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းပုံပါတဲ့ မီးပုံးပျံ အနီလေးတွေ၊ ပြည်သူ့တွေရဲ့ ဆန္ဒမှန် "Free Burma" ဆိုတဲ့ စာတန်းပါတဲ့ မီးပုံးပျံ အနီလေးတွေ၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ သာသနာ့ အာဇာနည် ကျောင်းသား အာဇာနည်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မီးပုံးပျံ အနီလေးတွေကို ကောင်းကင်ထက်စီ လွှတ်တင်ကြရအောင်လားဗျာ။
မီးပုံးပျံလေးတွေ ကောင်းကင်ယံဆီ ပျံဝဲသွားပြီဆိုတာနဲ့ ဒီ နအဖတွေ၊ ကပ်ဖားရပ်ဖားကောင်တွေ ငုတ်တုတ် ထိုင် ကြည့်ရုံမှတပါး ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့လည်း လိုက်ရိုက်လို့မရ၊ အဲ…သေနတ်တွေနဲ့ လိုက်ပစ်ချရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ လူတစ်စုကို လိမ်ညာလို့ရချင်ရမယ်၊ လူထုကိုတော့ လိမ်ညာလို့ မရကြောင်း သက်သေပြလိုက်ကြပါစို့။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေ ထက်ကောင်းကင် ဘ၀ဂ်ထိတိုင် သိနိုင်ကြပါ စေလို့…..။
New Opportunity to Show People's Desire
Coming Lighting Festival, and Tazaungdine Festival we can show People's Desire by releasing Hot Balloon with attachment.
Now Lighting Festival and Tazaungdine Festival are very close.
I'm thinking of how to show our desire to the Junta. Ok what we can do is releasing Hot Air Balloon (Mie Pone Pyan) to air, with Sar Sa Na flag, NLD logo, "Free Burma" letter or even Red ballon can show our desire. Once the balloon is up to the air it's very hard to take it down. Means our desires are up in the sky and not easily crack down by gun. Let the key full with people desire in ThaDinKyut Night.
ခုတလော ဘာစာမှ မရေးနိုင်ဘဲ ရှိတုန်း ဖြန့်ဝေချင်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေပဲ တင်နေရပါတယ်။ ခုလည်း ကိုနစ်နေမင်း ဘလော့က ပို့စ်လေးတခု သဘောကျတာနဲ့ ယူတင်လိုက်ပါတယ်။
နအဖရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သတင်းစာ(သတင်းညာ)တွေ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့နေရပါရဲ့ဗျာ။
ပထမဦးဆုံးကတော့ သတင်းစာပါ နအဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ နောက်မှာ “ကမ္ဘာကျော် လူလိမ်ကြီးများ” ဆိုပြီး ရေစာနဲ့ပါလာတုန်းကတည်းက စလို့ အင်မတန် မှန်ကန်သော ရေးသားမှု ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာပြည်သူများက အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်ရလောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ခံခဲ့ကြလေရဲ့ ။
ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်တဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာ “killer Than Shwe” နဲ့“Freedom” စကားလုံးကို ခရီးသွားကြော်ငြာပုံစံနဲ့ ထည့်သွင်းခဲ့လို့ ပါ။
မကြာခင်ရက်ကလည်း ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ “Support The Monks, Free Burma” ဆိုတဲ့ စာရွက်ကပ်ထားတာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံကို အီရတ်စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲဆိုပြီး နအဖ သတင်းစာ ထဲမှာ ပါလာတာလည်း တကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေပါ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး တွေ့ မြင်ကြရလေရဲ့။
အခုလည်း ကြည့်ပါဦး။ ဒီတစ်ခါကတော့ ဗေဒင်လက္ခဏာအဟောအပြောတွေ သိပ်ယုံတတ်တဲ့ နအဖတို့ အတွက် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဘဲ။ မြန်မာပြည်သူများသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ အမုန်းပွားတာ ခံနေရတဲ့ နအဖဗိုလ်ချုပ်များ မကြာခင်မှာ ဇီဝိန်ချုပ်တော့မယ့် အလားအလာ ပြနေတာ။ ရဟန်းတော်တွေကို ပြစ်မှားခဲ့တဲ့ ကံကြီးထိုက်တော့မယ့် အခြေအနေလို့လည်း ပြောရနိုင်တယ်။ ရဟန်းတော်တွေကို စော်ကားခဲ့လို့ မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေသွားခဲ့တဲ့ ကြံ့ဖွတ်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်အပျက်ကလည်း သက်သေပြခဲ့လေရဲ့။ အမျိုးသား ညီလာခံကြီးကျင်းပနေတဲ့ အဆောက်အဦးရဲ့ မီးဖိုချောင်ကို မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရတာလည်း မှတ်မိကြမှာပေါ့။
ခု နိမိတ်ကြီးကတော့ “သေပြီတော်” တဲ့။ နအဖရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ www.myanmar.com (http://www.myanmar.com/newspaper/nlm/index.html) မှာ (၁၈) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (အင်္ဂလိပ်စာ) မှာပါတဲ့ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာချက်ကို ရေးတင်ထားတာ “နေပြည်တော်” အစား “သေပြည်တော်”(တရုတ်သံလေးနဲ့ဖတ်ရင်)လို့ ရေးထားတာပါ။ ကြည့်ကြည့်ကြပါဦး။ အင်းးး... နအဖရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးကတော့ လားလားမှ မကောင်း ...
ဒီကနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်)ဟာ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ... ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲ သမိုင်းရဲ့ ဦးဆောင် သူရဲကောင်းတွေထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ။
ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ထားတဲ့၊ နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေး အတွက် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းနေတဲ့၊ စဉ်းစားနေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်.. ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ၄၅နှစ်မြောက်မွေးနေ့က စလို့ ရှေ့ဘ၀ခရီး တလျှောက်မှာ အန္တရာယ်ခပ်သိမ်း ဘေးရန်ခပ်သိမ်းမှ ကင်းလွတ်ငြိမ်းပြီး၊ သူလိုချင်တဲ့.. လွတ်လပ်တဲ့.. ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့.. မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံး မြင်တွေ့ရပါစေ…. လို့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
အီမေလ်ထဲက ရတဲ့ စာလေးတစောင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မူရင်းက pdf နဲ့ လာတာကို ဓါတ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူနာမည်မပါပေမဲ့ စာရေးသူရဲ့ စေတနာနဲ့ ခံစားချက်က
ပေါ်လွင်လှတာမို့ မျှဝေခံစားကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
၃။ ငါတို့သည် နအဖ ၏ အရေးပါသော စက်ကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။
၅။ ငါတို့သည် နအဖ ထုတ်ဝေသော ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ စာစောင်များကို သပိတ်မှောက် ရမည်။
၉။ ငါတို့သည် ရဟန်းတော်များ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများကို နအဖတို့ မတရား ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း မခံရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ကြမည်။ လွတ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်ပေးကြမည်။ ကျန်ရစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေးများကို လူအား ငွေအား စသည့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထောက်ပံ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ကြမည်။
လူညာတွေ လိမ်လို့ မရသလို
ဒါမှမဟုတ် သွေးနံ့ရတဲ့ ပင်လယ်လား..။
ငါတို့ ရေနန်းယာဉ်သာ သင်္ဘောကို မမျှော်နဲ့..
ငါတို့ ကောင်းဘွိုင်ကြီး ဂျွန်ဝိန်းကို မမျှော်နဲ့..
ငါတို့ ဖိနပ်သာ ငါတို့ သေနတ် ဖြစ်တယ်။
(၁၁၊ ၁၀၊ ၀၇)
မြန်မာပြည်သူများ အတော်များများတွင် စိတ်ဒဏ်ရာရသွားကြသည်။ အမာရွတ်ထင်စေနိုင်လောက် သည့် စိတ်အတွင်း ဒဏ်ရာမျိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အစုအပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲများ၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များက သွေးမတိတ်သေး။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အစုအပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲများ၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များက သွေးစိမ်းရှင်ရှင်။ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ ရစေခဲ့ပြန်သည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ အတော်ကုစားရန် ခက်ပါလိမ့်မည်။ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးတို့၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ ပြောနေကြသော်လည်း ဤတကြိမ်တွင်တော့ အစစ်အမှန် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် အတော် အချိန်ယူကြရတော့မည် ဖြစ်သလို၊ ပျက်ပြားသွားပြီဖြစ်သော ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်း နိုင်ငံတခု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုအနေဖြင့် အတော် ရုန်းကန်ကြိုးပမ်း ကြရပါဦးတော့မည်။
(Trauma) ဟု ဆေးပညာရပ်အားဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသော စိတ်တွင်းနာ၊ သို့မဟုတ် စိတ်ဒဏ်ရာသည် လူတဦးချင်းအဖို့ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ကြရသော ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ လူတဦး၏ စိတ်တွင်းဒဏ်ရာများ ကုသနိုင်ရေးအတွက် ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ပေးကြရသည်။ အချို့ပညာရှင်များက ၇-နှစ်မှ ၁၅-နှစ်တိုင်တိုင် အချိန်ယူကြရသည်ဟု ဆိုကြပါ သည်။ ကဗျာဆရာကြီးဦးတင်မိုးက သူ၏ကဗျာတပုဒ်တွင် မြန်မာပြည်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ “ပြည်တွင်းနာ” ဟု သုံးနှုံးခဲ့ဖူးသည်ကို ကျနော် မှတ်မိနေပါသည်။ သူက ကပ်သဘော၊ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းသဘောကို ပြောသည်ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ကျနော်၏ယူဆချက်ကတော့ ဤ“ပြည်တွင်းနာ” ဟူသော စကားလုံးတွင်ပင် စိတ်ခံစားချက်သဘောများလည်း ပါဝင်နေသယောင် ထင်မှတ်မိပါတော့သည်။ လူတဦးချင်း၏ စိတ်ဒဏ်ရာများ ပေါင်းစည်းမိသောအခါ၊ ကပ်ဘေးဒုက္ခ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ စစ်ကြီးများ၊ အဖျက်အဆီး ဘေးဆိုးကြီးများ ကြုံတွေ့ရသောအခါ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုလုံး စိတ် ဒဏ်ရာ ခံစားရ တတ်ပါသည်။ ကျနော်ကတော့ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်း၊ ၂၀၀၇ သံဃာများ၏ ကံဆောင်ပွဲဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းမှု များသည် ကျနော်တို့ လူမှုအဖွဲ့ကြီးတခုလုံးအတွက် တခုအပေါ် တခုဆင့်၍ စိတ်ဒဏ်ရာများ အနာဖေး မတက်နိုင်ခင်၊ နောက်ထပ် နာကျဉ်စေပြန်ခဲ့ပြီဟု မြင်နေမိပါတော့သည်။
ဤသို့ စိတ်ဒဏ်ရာရစေလောက်အောင် ကြုံရသော အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုသူတဦး၏ လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်သော ကျနော်တို့၏ ယုံကြည်ထားချက်ကို အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းမှ စ၍ ဆွဲလှုပ်ခံလိုက်ရပါ သည်။ တနည်းဆိုရသော် ယုံကြည် ထားသောအရာ ကိစ္စများလည်း ပြိုကွဲကြေမွသွားရပါတော့သည်။ ထို့အပြင် စိတ်ဒဏ်ရာရလျှင် လူအများသည် ဤဒဏ်ရာ ပြေပျောက်စေကြောင်းအတွက် နည်းလမ်း များစွာဖြင့် တုံ့ပြန်တတ်ကြပါ သည်။ ဥပမာအားဖြင့် -မိမိစိတ်တွင်း ခံစားချက်ကို ဖြေသိမ့်နိုင်ရေး အတွက် အရက်သောက် ထွက်ပေါက်ရှာကြခြင်းများ၊ အိမ်ပြန်လာသောအခါ မိန်းမရိုက်၍ အိမ်တွင်း အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်မှုများ၊ အခြားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် လွဲမှား မူမမှန်စွာဖြေရှင်း ကြသည်များလည်း တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဤတုံ့ပြန်ပုံလုပ်ငန်းမျိုးကို Coping mechanism ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
နိုင်ငံအများတွင်လည်း ဤသို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးတရပ်လုံး စိတ်ဒဏ်ရာရစေသော ဖြစ်ရပ်များ ကြုံခဲ့ကြရ ဖူးပါသည်။ ဥပမာ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုလျှင် ပြည်တွင်းစစ်၏ သမိုင်းကြောင်းကို ပြော၍ မဆုံး သေးသကဲ့သို့၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကို ကြုံခဲ့ရသော မျိုးဆက်များက ရန်-ငါ (အဖြူ သို့မဟုတ် အမဲ) စသည့် အတွေးများနှင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲကို ဆက်ခဲ့ကြ ကြောင်းလည်း လေ့လာသူများက ဆိုကြပါသည်။ ထို့အပြင် စက်တင်ဘာ ၁၁ (September 11) သည် အမေရိကန် လူထု အများအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ် ရစေခဲ့သော ကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။ ဤစက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ တုံ့ပြန်လာပုံ ဆိုးကျိုးများကို မိမိတို့တွေ့ကြုံ ခံစားနေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်လူထုများ၏ အစွန်း ရောက် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို ပိုမိုပြင်းထန်စေသကဲ့သို့ အခြားသော လူမှုအခွင့်အရေး၊ စစ်၊ ကမ္ဘာ့ဆက်ဆံရေး မျက်နှာစာများ တွင် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။
အချို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာရစေသော ဖြစ်ရပ်များ ကြုံကြရဖူးပါသည်။ နာဇီများ ၏ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဂျူးများကို လက်စတုန်းသုတ်သင်မှုသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ထိခိုက်စေခဲ့ သကဲ့သို့၊ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံမဲ့တွန်းပို့ခံရသောအခြေအနေ၊ ဒုက္ခသံသရာများကလည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ၀ါးအစည်းပြေစေ သကဲ့သို့၊ တဖက်တွင်လည်း အစွန်းရောက် အယူအဆများ ထွက်ပေါ်လာစေပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများအကြောင်း လေ့လာကြသူများက ထိုလူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ကောက်ယူမွေးစားထားသော စိတ်ဒဏ်ရာ (chosen trauma) များ အကြောင်းကိုလည်း အကျယ်တ၀င့် လေ့လာဖူးခဲ့ကြပါသည်။
ယခုတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြသော သံဃာများကို လမ်းမလယ်ခေါင် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် ချေမှုန်းနေပုံများကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ သံဃာများနှင့် ဆန္ဒပြပြည်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲချေမှုန်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်တင်ဘာ (၁၁) Burma September 11 ဟု တင်စားလျှင် မမှားနိုင်ပါ။ ထစ်ကနဲရှိ စစ်တပ်အားကိုး၊ လက်နက်အားကိုးဖြင့် ဖိနင်းချေမှုန်းလိုသည့် အာဏာရှင်များ၏ ဒေါသ၊ အမျက် မာန်မာနများကို မြင်တွေ့လိုက်ကြရသည်။ ထို့အပြင် တဖက်သတ်ပြောဆို ၀ါဒဖြန့်ချိနေမှုများကလည်း၊ ထပ်မံ စော်ကားသကဲ့သို့ ရှိနေစေသည်။ သံဃာများက ဆိုခဲ့သကဲ့သို့ မေတ္တာဓါတ်အားနည်းသည့် အပြုအမူများ၊ ရုန့်ရင်းကြမ်း တမ်းမှုများကလည်း ဆက်လက်သည်းညည်း မခံနိုင်စရာ။ လူအများ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာရေးအခြေခံကိုပါ ရိုက်ချိုးကြေမွစေသကဲ့သို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
သမိုင်းအရလည်း စိတ်နာကျည်းစရာများက အကြိမ်ကြိမ်၊ ၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကို ဖြိုခဲ့သည်။ ဦးသန့်အရေးအခင်းတွင် သွေးချောင်းစီးခဲ့ရသလို၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် အလုပ် သမားဆန္ဒပြပွဲများ ကိုလည်း ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၇ သွေးချောင်းစီးရမှုများက မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်နေသည်။ ထိုထက်ပို၍ ဆိုးသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားသည့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား၊ အလေးအမြတ်ထားသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဟု ဂုဏ်ယူနေကြဆဲ ရဟန်း သံဃာများနှင့် သာသနာကို အဆိုးဝါးဆုံးဖျက်ဆီး ချေမှုန်းလိုက်မှုသည် လူအများအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာကို ပို၍ နက်ရှိုင်းလာစေခဲ့တော့သည်။
သံဃာများ၏ ဆန္ဒပြပွဲများကို အကြမ်းဖက်ချေမှုန်းနေစဉ်တွင် ပြည်တွင်းမှ “သဲ” ဟူသော ကလေးမ တဦး နှင့် မိမိ ချက်တင် စကားပြောခွင့် ရနေခဲ့ပါသည်။ သူရော၊ ကျနော်ပါ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြ၍ အတော်လည်း စိတ်ထိခိုက်နေကြရပါသည်။ “ပစ်နေပီ။ ပစ်နေပီ။ လုပ်ကြပါဦး” “သေကုန်ကြတော့မှာပဲ” တဖက် မြန်မာပြည်ဖက်မှ သူမ ရိုက်ပို့လိုက်သော စာသားများ ကျနော် ရရှိနေပါသည်။ သူမက ပြင်ပသို့ အဖြစ်အပျက်များကို တတ်နိုင်သမျှ သတင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားကူညီနေ သူသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနှင့် ယခင်ကလည်း မရင်းနှီး၊ မကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါ။ “ပြောပေးကြပါဦး” “ကျမတို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင် တော့ဘူး” သူမက အဖြစ်အပျက် အသေးစိတ်ကို ပေးပို့နေချိန်တွင် ခံစားချက်ကိုပါ ကျနော်ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်နေရပါသည်။
ကျနော်တို့၏ စိတ်ဒဏ်ရာများက ပို၍ပို၍ နက်ရှိုင်းလာစေပါသည်။ ကျနော်တယောက်ထဲ မဟုတ်။ ကျနော် တို့ လူမှု အသိုင်း အ၀ိုင်းကြီးရော၊ နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များပါ ထပ်၍ စိတ်ဒဏ်ရာသင့်ရပြန်ပါပြီ။ ဘယ်တော့များမှ ပြီးနိုင်တော့ မည်နည်း။ မည်သည့်အခါမှ ကျေပျောက်နိုင်ကြပါတော့မည်နည်း။ မျိုးဆက် များ ဆင့်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရကတော့ လူအနည်းစုကလေး၏ အုံကြွမှု၊ ကောက်ရိုးမီးသဖွယ် ပုံဖော်နေပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့မည်ဟု အပေါ်စီး မက်လုံးပေးရုံလောက်ဖြင့် ငြိမ်းအေးသွားတော့မည့် ကိစ္စ ဟု ထင်နေပုံရပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သော စိတ်ဒဏ်ရာ အတွင်းကြေကို ဤမျှလောက်ဖြင့် ကျေပျက်စေလိမ့်မည် မဟုတ် ပါ။ ကျနော်တို့၏ ယုံကြည်မှု အခြေခံတခုလုံး ကိုင်လှုပ်ခံလိုက်ရသောအခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး မျှော်စင်ကြီး ပြိုကျခဲ့ သလို အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုများ ပြိုကွဲ မြေပေါ်ပုံကျသွားရသည့် အခြေအနေကို ကျနော်မြင်နေရပါသည်။ ဤစိတ်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များဖြင့် ကျနော်တို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးက ကာလအတန်ကြာ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေကြရဦးတော့မည် ဖြစ်ပါတော့သည်။
“တန်ခိုးကြီးဘုရားများ .. ဗလီများ .. ဘုရားကျောင်းများ အားလုံးမှာ ..
၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ကြပါမယ် .. ။
ဖယောင်းတိုင်တွေကို ထွန်းညှိပြီးတော့ ဆုတောင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ ..
ဘယ်လိုရာဇ၀တ်မှုမျိုးကိုမဆို ကျူးလွန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ် ..
မုဒိန်းမှုတွေ .. လူသတ်မှုတွေ .. ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေ .. လုယက်မှုတွေ..
ကြိုက်တဲ့ရာဇ၀တ်မှု မှန်သမျှကို ကျူးလွန်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ကို
ကျွန်တော်တို့ လက်မခံတော့ဘူး .. ။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ..
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတလျှောက်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေ ..
ငိုရှိုက်သံတွေနဲ့ နာကျည်း တောက်ခေါက်သံတွေ ..
အားလုံးအတွက်ကို ကျွန်တော်တို့ တုံ့ပြန်ကြရပါတော့မယ် .. ။
အဲဒီ့ကြေကွဲမှုကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ပါမယ် .. ။
လွတ်လပ်ခြင်း .. ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ..
တုံ့ပြန်ပါမယ် .. ။”
at October 04, 2007 8 comments:
ကျမ ဘလော့မှာ တင်ပေးပါလို့ အီမေးလ်ထဲကနေ ရောက်လာတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေပါ။
ကလေးတယောက်ရဲ့ လက်ရာလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးခမျာ ကလေးကတောင် ရွံရွံရှာရှာ လှောင်ပြောင်ရတဲ့ အနေအထားရောက်နေတာ.. ရှက်စရာ.. စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
(ပို့ပေးတဲ့အတိုင်း မပြင်ဆင်ဘဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
အန်တီစုကို တကယ် အားနာ ငဲ့ညှာကြပါတော့...
ကြည့်ကြပါဦး..။ ကျမတို့ ရဲ့ အန်တီစုကို ကျမတို့ ရင်းနေကြတာ။ သူ့အသက်အရွယ်အရ ပျိုရွယ် ဖျတ်လတ်ချိန်တွေ အများကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ရပြီ။ သူ့ကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူလူထု အားမှတပါး အခြားမရှိ။ အာဏာရူး စစ်ခွေးတွေကတော့ အန်တီ့ကို သေတဲ့အထိ ချုပ်နှောင်ထားမှာပါပဲ။ လူထုကြီး အနေနဲ့ အန်တီစု ကို ပါးစပ်နဲ့ ချစ်နေလို့ သတိရတယ်ပြောနေလို့ မရတော့တဲ့အချိန် ရောက်နေပါပြီ။ ကျမတို့ နိုင်ငံ လွတ်မြောက်ဖို့ အရေးအတွက် အန်တီစု လွတ်မြောက်ဖို့က အဓိက ကျလှပါတယ်။ အန်တီစု လွတ်မြောက်ဖို့ဟာလည်း လူထုတရပ်လုံးအားနဲ့ စစ်တပ်ကို အင်အားချိနဲ့ ပြုတ်ကျသွားအောင် လုပ်တာက လွဲလို့ တခြားနည်း မရှိပါ။ ကျမတို့ပြည်သူတွေ တကယ် လွတ်မြောက်ချင်ပြီ ဆိုရင်တော့... .... ...
အညတြပြည်သူတစ်ဦး၏အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇)
လေးစားအပ်ပါသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်၊ လက်နက်မဲ့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား ......
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို လိုလားသော မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ကိုယ်စား အညတရ မြန်မာ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အနည်းငယ်အကြံပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းတွင် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ စစ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆုံးခန်းတိုင်စေရေးအတွက် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ် လူထုတိုက်ပွဲအသွင်ဖြင့် လူထုနှင့် သံဃာ ပူးပေါင်းကာ စတင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ ဖစ်ပါသည်။၊ ယခင့်ယခင် ကာလများဆီက လူထုတိုက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် ပုံဖော်တော့မည်ဟု လွတ်မြောက်နယ်မြေရှိ NCUB, NLD(LA), FDB ကဲ့သို့သော ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း များက တရားဝင် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်ကို ကြားသိ ဖတ်ရှုခဲ့ရပါ သည် ခင်ဗျား။
ထိုသို့ ကြေညာချက်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖတ်ရှုကြည့်ခဲ့ရာတွင် လူထုတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ သည် ပြည်တွင်းက လူထုအပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်ဟူသော အာဘော်မျိုးကို ဖတ်ရှုခဲ့ရပါ သည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်တွင်းကလူထုသည် သံဃာတော်များ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်မှနေကာ လူထုတိုက်ပွဲ အသွင်မျိုးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်မှာ ရက်သတ္တတစ်ပတ်မျှ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကို လူကြီးမင်း တို့ အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရသည့် ပြည်သူနှင့် သံဃာများစွာရှိနေသလို၊ လက်ရှိ အဖမ်းဆီးခံ၊ အနှိပ်စက်ခံနေရသည့် ပြည်သူလူထုနှင့် သံဃာများလည်း များစွာရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်သည် ပြည်တွင်း၏အင်အားကိုသာမက ပြည်ပမှ လူကြီးမင်းတို့ကပါ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြရမည့်ကာလဟု ယူဆမိပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ အဖွဲ့အစည်း များ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ လက်နက်ကိုင်၊ လက်နက်မဲ့ တိုက်ပွဲဝင် နေကြသူများအနေနှင့် ပြည် တွင်းက လူထုကြီး၏ သတ္တိကို လေးစားသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အားပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပ လွတ်မြောက်နယ်မြေများမှနေ၍ နည်းလမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြုကာ ပြည်တွင်းကို အထောက်အပံ့ပေးရန် အချိန်တန်ပြီဟု ယူဆမိပါသည်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံး၏ ဘုံရန်သူ သာသနာဖျက် မင်းဆိုးမင်းယုတ် နအဖ စစ်အစိုးရအား ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်သင့်ပြီဟုလည်း ထင်မှတ်မိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ အများစုမှာ နအဖမှ ဖမ်းဆီးထားသူများမှလွဲလျင် ပြည်ပတွင်သာ ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် လူထု လိုက်ပါမှုကို တကူးတကစည်းရုံးစရာမလိုပဲ ယခုရရှိနေပြီဖြစ် သဖြင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေ အသီးသီးမှ ယခု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသော နည်းဗျူဟာများချမှတ်ကာ စနစ်တကျ ဦးဆောင်မှု ပေးစေလိုပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူထုလိုက်ပါလာအောင် စနစ်တကျစည်းရုံးလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် အောင်ပွဲရသည်ချည်း ဖြစ် သည်ကို လူကြီးမင်းတို့ သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လွတ်မြောက်နယ်မြေရှိ ခေါင်းဆောင်များက ဦးဆောင်မှုပေးလျှင် ပြည်တွင်းက ပြည်သူလူထုသည် လိုက်ပါဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသည့် အနေအထားကို ရောက်ရှိမြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေအသီးသီးရှိ ခေါင်းဆောင်များက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီး ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ် နေသည့် ပြည်တွင်းမှမြန်မာပြည်သူလူထုကို လမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါသည်။
ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် ကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ရုံ၊ သံရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ နေရုံမျှ နဲ့ကျေနပ်မနေကြစေလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ ပြည်သူလူထုလိုလားသော ပြည်ထောင် စု စစ်စစ် တည်ထောင်ရေးကို ပြည်တွင်းမှ မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သင့်သည့်အချိန် ကျရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိစေလိုပါသည်။
၂၀၀၇၊ စက်တင်ဘာတိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရသော သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူလူထု အာဇာနည် များကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပေါ်ပေါက်လာသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အခွင့်ကောင်းကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်သင့်သည်ကို သတိပြုစေချင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဤအိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(From Ko Htike)